Yintoni Okufanele Uyazi Ngayo Iinkonzo Zokhuseleko Lentlalo
Isebe le-Nondyebo yase-United States liqalise ukupapasha iphepha lokuhlola ukhuseleko lwezeNtlalo kunye nokunye okuhlolwayo kwintlawulo ngomhla we-Meyi 1, 2011. Kwakudinga ukuba nabani na abafaka izicelo zokuhlola i-Social Security kunye nezinye iintlawulo zomthetho kunye nangemva komhla wokufumana iintlawulo zabo ngekhompyutha.
[ Ukusetyenziswa kweeNkonzo zoKhuselo loLuntu ]
Abo baqala ukufumana i-Social Security ukuhlolwa phambi koMeyi ka-2011 ukuya kutsho ngo-Matshi 1, 2013, ukubhalisela iintlawulo zekhompyutha, iSebe lezeNondyebo livakalise.
Abo bangabhaliswanga ukuba bafumane i-Social Security check checks-egcinwe ngalolo suku baya kufumana iinqununu zabo ngeNkqubo yeKharityhulam ye-Express Express.
"Ukufumana inkokhelo yakho yoKhuseleko loLuntu okanye iNkxaso yokuNikwa kweNgcaciso yeNkokhelo nge-deposit ngqo okanye kwi-Express Express ikhuselekile kwaye inokwethenjelwa," uMichael J. Astrue, uKomishinala wezeNhlalakahle yeNtlalo, wathi ekuvakaliseni utshintsho.
Ngubani ochaphazelekayo ngokuphela kweePhepha zePhepha
Utshintsho olwenziwe kuKhuselo loLuntu, iNgeniso yeNkxaso yoKhuseleko , iiNzuzo zeMantshi, kunye nabani na abafumana izibonelelo ezivela kwiBhodi yoMhlala-phantsi we-Railroad, i- Office of Personnel Management kunye neSebe lezeMisebenzi (Black Lung) .
"Akufanele ukhathazeke ngetekethi yakho elahlekileyo okanye eyebiwe kwaye imali yakho ifumaneka ngokukhawuleza ngomhla wakho wokuhlawula," utshilo u-Astrue. "Akukho mfuneko yokulinda i-imeyile ukuba ifike."
Ngo-2010, ngaphezulu kwe-540,000 yoKhuseleko loLuntu kunye neNkxaso yoLondolozo lweeNkxaso zePhepha zanikwa ingxelo elahlekileyo okanye eyebiwe kwaye kwafuneka ithathelwe indawo, iSebe leNondyebo lathi.
Ukulondolozwa ekupheleni kweePhepha zePhepha
Ukupapashwa kwephepha loKhuseleko lwezeNtlalo lihlolisisa ngokupheleleyo kulindeleke ukuba ligcine abahlawuli berhafu malunga neerandi ezingama-120 ngonyaka, okanye ngaphezulu kwe-1 billion yezigidi ngaphaya kweminyaka eyi-10. Amagosa karhulumente achaze ukuba ukuphelisa iphepha lokukhuselwa kweNtlalo loKhuseleko "kuya kunika iingenelo ezintle kummandla, ukugcina izigidi ezili-12 zeepapu kwiminyaka emihlanu yokuqala."
"Izigidi ezingaphezu kwezigidi ezili-18 ezilindelekile ukuba zifikelele kwiminyaka emihlanu ezayo, kunye nabantu abayi-10 000 ngosuku lokuba banelungelo lokufumana inzuzo yeNtlalo," kusho uMgcini-mali uRosie Rios.
Iindleko ezingama-92 ngaphezulu ukukhupha i-check check by i-deposit ngqo. Sithatha umhlala-phantsi wephepha loKhuseleko lweNtlalo ngokubhekiselele kwiintlawulo zekhompyutheni kuba yinto enyanzelekileyo yokwenzela abafumana inzuzo kunye nabahlawuli berhafu baseMerika ngokufanayo. "
Oko Kufuneka Uyenze Ngoku
Ukuba ufuna izicelo ezintsha , ngoku kufuneka ukuba ukhethe indlela yokuhlawula i-elektroniki, ingaba idiphozithi ngqo kwi-Checks Security yakho okanye enye inzuzo ye-federal kwi-akhawunti yebhanki okanye kwi-akhawunti yomanyano-mboleko.
Xa ufaka isicelo sesheke soKhuseleko lweNtlalo okanye enye inzuzo encedisayo, uya kufuneka:
Inombolo yakho ye-transit ye-transit inombolo, efumaneka rhoqo kwisicatshulwa somntu;
Uhlobo lweakhawunti, ukujonga okanye ukugcina;
Kwaye nenombolo ye-akhawunti, efumaneka rhoqo kwisheke.
Unokukhetha kwakhona ukufumana isheke sakho soKhuseleko lweNtlalo kwikhadi lokubhadela elihlawulwa okanye kwiKharityhulam ye-Express Express Debit MasterCard.
Okufuneka Uyenze Ngo-2013
Ukuba okwangoku ufumana isheke soKhuseleko lweNtlalo okanye enye inzuzo yentlawulo ye-federal, kufuneka ushintshe kwiintlawulo zekhompyutha phambi koMatshi 1, 2013.
Unokutshintshwa ukusuka kwiphetshana lokuhlola ukuhambisa idiphozithi kwi-www.GoDirect.org, ngokubiza umnxeba we-Uncedo-mali we-Sondon ye-US Treasury Centre (I-800) 333-1795, okanye ngokuthetha nebhanki okanye ummeleli wemanyano.
Nabani na ofumana iintlawulo zentlawulo ye-federal ngokuqhubekayo ukufumana imali yabo njengesiqhelo ngosuku lwabo lokuhlawula. Akukho senzo esilindelekileyo.
Malunga nePhepha loKhuseleko lweNtlalo
Inkcazo yokuqala yoKhuselo lweNtlalo yenyanga ifunyenwe ngu-Ida Mae Fuller ngoJan 31, 1940, ngokweSebe leSebe lezeMali. Ukususela ngelo xesha abantu abayizigidi ezili-165 baye bafumana inzuzo yeNtlalo yeNtlalo.
Ukunyuka kwintlawulo ye-elektroniki kuye kwanda ngokunyuka, iSebe lezeNondyebo lathi. Ngo-Meyi ka-2011, iintlawulo zekhompyutha zenziwe ngaphezu kwekota enye yeentlawulo ezingekho phantsi kwemali kwilizwe lonke.
Kwakukho iireyibhile ezi-5.7 zeetekisi ezibhaliweyo ngo-2009 kunokuba ngo-2006, ukwehla kweepesenti ezingama-6.1 ngonyaka - ngelixa iikhompyutheni zekhompyutha zanda 9.3 ekhulwini ngeli xesha elifanayo. Phakathi kwabamkeli-mali abancedisayo, malunga nesibhozo kwi-10 bafumana isheke sabo soKhuseleko loLuntu okanye enye inzuzo yentlawulo ye-federal, ngokweSebe le-Nondyebo.
8 Ukuphuka kweBhola - Indlela yokudiliza kwi-8 ibhola
Imithombo yamandla ahlaziyiweyo aphezulu
UJese Owens: Ixesha leMine leMidloli yeGoli yeOlimpiki
Imbali yeByroot Beer
Yiyiphi i-Honky Tonk?
Ukuvumelanisa iingxube kunye ne-GUI kwisicelo seDelphi
Iingcaphuno Zika-21 Zinike Umbono Wehlabathi Lethu
Ukuqonda iVelb Tenses
Isingeniso kwiNcwadi yamaFilipi